सेतीको खोचमा नवविवाहिताको दुर्घटना कि आत्महत्या ? (भिडियोसहित) - TheSidhaKura
सेतीको खोचमा नवविवाहिताको दुर्घटना कि आत्महत्या ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ३० वैशाख । तनहुँस्थित रक गार्डेनका रुपमा चर्चित सेतीको खोचमा टिकटक बनाउन लाग्दा वेपत्ता युवती पवित्रा लम्सालको स्थिति अझै अज्ञात छ । प्रहरीले उनको खोजी भइरहेको जनाएको छ । उनी नदीको खोचतिर बढेको र साथीहरुले नजान भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । दुईजना सार्थी उनी सँगै थिए ।
उनीहरु चिच्याएर नजान भनिरहेको सुनिन्छ । साथीहरु चिच्याउँदा पनि उनी मानेकी थिइनन् । ५ दिन अघि विवाह गरेर माइती पुगेकी किशोरी वेपत्ता भएकी छिन् । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका ८ को पुल्चोकस्थित रक गार्डेन भनिने सेती नदीमा घटना भएको हो । ६ दिनअघि मात्र विवाह गरेकी १९ वर्षीया पवित्रा दुरान फर्काउन माइतीघर गएकी थिइन् । त्यहाँबाट उनी दुई साथीलाई लिएर रक गार्डेन पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । भिडियोमा पवित्रालाई लाछी भन्छन् भन्दै नदीमा नजान भनिएको सुनिन्छ । उनी भिडियो बनाउँदै गर्दा खसेकी थिइन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराले दुर्घटना या आत्महत्या प्रयास के हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । प्रहरीले उनको खोजी भइरहेको जनाएको छ । पवित्राको शुक्ला ८ लालिम माइती घर हो । भीमाद १ मा उनको ६ दिनअघि विवाह भएको थियो । Video Click Here
← विष्णु माझीको ‘चरी जेलैमा’ को युट्युबमा नयाँ कीर्तिमान फेरी श्रीमानसँग रोमान्टिक मुद्रामा प्रियंका (फोटो फिचर) →